CES 2018 ၏အကောင်းဆုံး | Gadget သတင်း
Ignatius ခန်းမ | | အပ်ဒိတ်လုပ်ထားသည်။ 12/01/2018 23:52 | ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ, ယေဘုယျ
Las Vegas တွင်အကြီးမားဆုံးစားသုံးသူနည်းပညာပြပွဲ CES 2018 နှင့်အတူအပြီးသတ်ဖို့အချိန်ရောက်လာပြီ။ ဒီပြပွဲတစ်လျှောက်လုံးမှာအလွန်ကြီးမားသောရုပ်မြင်သံကြားများမှဆက်သွယ်ထားသောကရိယာများ၊ အဆင့်မြင့်လက်ပ်တော့ပ်များ၊ မည်သည့်အီလက်ထရောနစ်ထုတ်ကုန်ဒီတရားမျှတမှာနေရာတစ်နေရာရှိခဲ့ပါတယ်။
ကဏ္ all အားလုံးမှအဓိကထုတ်လုပ်သူများကတစ်နှစ်ပတ်လုံး၊ အများပြည်သူထံရောက်ရှိနိုင်မည့်ထုတ်ကုန်အားလုံး၏အကြိုပြသမှုကိုပြသခဲ့သည်။ ထိုတွင်နောက်ထပ်တစ်နှစ်၊ တီဗွီနှင့်မော်နီတာများကိုအထူးအာရုံစိုက်စေသည်။ အကယ်၍ သင်ဟာဒီပြပွဲမှာစိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးထုတ်ကုန်များနှင့်ထုတ်ကုန်များကိုသိလိုပါကဤနေရာတွင်အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြထားသည် CES 2018 ၏အကောင်းဆုံး။
1 တီဗီများ၊ မော်နီတာများနှင့်ပရိုဂျက်တာများပေါ်တွင် CES 2018
1.1 LG 88-inch 8k OLED TV
1.2 LG 65-inch rollable OLED TV
1.3 LG က ၁၅၀ လက်မ 4k projector
1.4 ၆၅ လက်မ NVIDIA မော်နီတာ
1.5 Samsung က QLED နည်းပညာနဲ့မော်နီတာကိုကွေးညွှတ်လိုက်တယ်
1.6 Samsung မှ ၁၄၆ လက်မတီဗီ
1.7 ၂၀၁၈ အတွက်ရုပ်မြင်သံကြားများတွင် Sony ၏အလောင်းအစားဖြစ်သည်
1.8 Panasonic သည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင်၎င်း၏ရုပ်မြင်သံကြားများတွင် OLED နည်းပညာကိုလောင်းကစားသည်
2 ကရိယာအတွက် CES 2018
3 တယ်လီဖုန်း၊ ဓာတ်ပုံနှင့်မိုဘိုင်းဆက်စပ်ပစ္စည်းများရှိ CES 2018
3.1 Sony Xperia XA2, XA2 Ultra နှင့် L2
3.2 Alcatel 2018 အကွာအဝေးတစ်ခုလုံးတွင် ၁၈: ၉ ပုံစံဖြင့်မျက်နှာပြင်တစ်ခုရှိလိမ့်မည်
3.3 Project Linda ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ Razer ဖုန်းကိုလက်တော့ပ်အဖြစ်ပြောင်းလဲဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်
3.4 Panasonic က Lumix GH5S
3.5 DJI Osmo Mobile2နှင့် Ronin S
4 ဝတ်ဆင်အပေါ် CES 2018
4.1 Block, ပထမ ဦး ဆုံး modular ဝတ်ဆင်
4.2 Casio G-Shock သည်စမတ်ကျလာသည်
5 ကို virtual နှင့်တိုးပွားအဖြစ်မှန်အတွက် CES 2018
5.1 HTC က Vive Pro ကို
6 ကွန်ပျူတာအတွက် CES 2018
6.1 acer မှ
6.2 Dell က XPS 13
6.3 Lenovo က Miix 630
6.4 Asus က
7 အသံ CES 2018
7.1 JBL သည်၎င်း၏သယ်ဆောင်ရလွယ်သောစပီကာများကိုသက်တမ်းတိုးသည်
8 မော်တော်ယာဉ်အတွက် CES 2018
8.1 Byton, အနာဂတ်၏ SUV ကား
8.2 Fisker E- ရွေ့လျားမှု
9 စက်ရုပ်အတွက် CES 2018
9.1 ဆိုနီ၏ခွေးကလေး Aibo သည်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်
တီဗီများ၊ မော်နီတာများနှင့်ပရိုဂျက်တာများပေါ်တွင် CES 2018
ကိုရီးယားကုမ္ပဏီ LG ကကျွန်ုပ်တို့လက်ထဲတွင်ရှိသည်။ ငါတို့ပိုက်ဆံရှိရင်, 88k resolution ရှိတဲ့ပထမဆုံး ၈၈ လက်မ OLED တီဗီအကြောင်းအရာအတွက်ရှာရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ တူညီသောနည်းပညာကိုအသုံးပြုထားသောအကြီးဆုံး OLED မော်ဒယ်လ်သည်လက်ရှိတွင်စျေးကွက်တွင် ၇၇ လက်မနှင့် 77k resolution ရှိသည်။ ယခုအချိန်တွင် LG သည်ဤအံ့မခန်းဖွယ်ရုပ်မြင်သံကြား၏ထုတ်လွှင့်သည့်နေ့ရက်နှင့်ဈေးကွက်တင်သည့်နေ့အကြောင်းကိုသတင်းမပေးခဲ့ပါ။
ရုပ်မြင်သံကြားစက်များနှင့်ကိုရီးယားကုမ္ပဏီ LG တို့နှင့်အတူဤကုမ္ပဏီကိုတင်ပြခဲ့သည် ပထမ ဦး ဆုံးအကြီးစား roll-up တီဗီကျွန်တော်တို့ကိုကကမ်းလှမ်းတဲ့ရုပ်မြင်သံကြား 4K resolution နှင့်မျက်နှာပြင်အတွင်းရှိအသံစနစ်ကိုလည်းပေါင်းစပ်ထားသည်Sony Crystal Sound Tech စနစ်၏ကျေးဇူးကြောင့်ဆိုနီသည်၎င်း၏အဆင့်မြင့်မော်ဒယ်များတွင်စတင်သုံးစွဲခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ဒီနည်းပညာကအရမ်းစျေးကြီးနေတုန်းပဲ၊ ဒါကပထမခြေလှမ်းပါ။ ဒီတော့မကြာခင်မှာပဲဒီဖန်သားပြင်ပါတဲ့စမတ်ဖုန်းတွေ၊ လက်ပ်တော့ပ်တွေစပြီးသူတို့မြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့နေရာတွေထက်နေရာသိပ်မယူကြတော့ဘူး။ ယခင်မော်ဒယ်လ်ကဲ့သို့ပင်ကိုရီးယားကုမ္ပဏီသည်စတင်မိတ်ဆက်သည့်နေ့ရက်သို့မဟုတ်စျေးကွက်သို့ရောက်သောအခါဤစက်ပစ္စည်း၏စျေးနှုန်းနှင့် ပတ်သက်၍ အကြောင်းကြားခြင်းမရှိပါ။
LG က ၁၅၀ လက်မ 4k projector
ပရိုဂျက်တာအမျိုးအစားအတွင်း၌ကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းသောပရိုဂျက်တာ LG အသစ်ကိုတွေ့ရသည် မျက်နှာပြင် ၄၀ ရှိတဲ့ ၄ လက်မမျက်နှာပြင်။ HU80KA, အီးအမည်ရှိဤမော်ဒယ်HDR10 နည်းပညာနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေပြီး ၂၅၀၀ lumens ရှိသောအလင်းထုတ်လွှတ်မှုကိုပေးသည်။ ၎င်းတွင်2watts စွမ်းအားရှိစပီကာ ၂ ခုပါရှိသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်အသံတိုးတက်စေလိုလျှင်ကုမ္ပဏီမှသို့မဟုတ် ၇.၁ စပီကာစနစ်မှအသံဘားကိုဆက်သွယ်နိုင်သည်။ အတွင်းပိုင်းတွင် webOS operating system ကိုဗားရှင်း ၃.၅ တွင်တွေ့ရသည်၊ ထို့ကြောင့်၎င်းသည် Gigabit Ethernet ဆက်သွယ်မှုကြောင့်၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့အကြိုက်ဆုံး streaming video platform တွင်ပျော်မွေ့နိုင်သည်။ ဆက်သွယ်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း။ HU7KA သည် HDMI connector နှင့် USB connection တစ်ခုကိုပေါင်းစပ်ထားသည်။ စျေးနှုန်းနှင့်ဖြန့်ချိမည့်ရက် - မဖော်ပြထားပါ။
၆၅ လက်မ NVIDIA မော်နီတာ
NVIDIA သည်ပါတီတွင်ပါ ၀ င်လိုသူဖြစ်သည်။ CES တွင် ၆၅ လက်မမော်နီတာကိုယနေ့အချိန်၌စျေးကွက်တွင်ရှာရန်ခက်ခဲသောအင်္ဂါရပ်များဖြင့်တင်ပြခဲ့သည်။ ဒီမော်နီတာ "Big Format GAming Display" အမည်ရှိ ကမ်းလှမ်းသည် ၆ လက်မမျက်နှာပြင် 65k resolution ရှိသော HDR နည်းပညာ၊4nits brightness၊ refresh rate 1000 Hz နှင့် 120 ms ထက်နည်းသော latency။ ၎င်းသည် Google Assistant နှင့်သဟဇာတဖြစ်ပြီး Android TV ပါ ၀ င်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းပလက်ဖောင်းမှရရှိသောကောင်းကျိုးများကိုခံစားရန်၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုနိုင်သည်။
Samsung က QLED နည်းပညာနဲ့မော်နီတာကိုကွေးညွှတ်လိုက်တယ်
LG ၏ဖော်ပြချက်နယ်ပယ်တွင်တိုက်ရိုက်ယှဉ်ပြိုင်မှုသည်ပထမဆုံးနှင့်အတူဤနယ်ပယ်မှသတင်းများကိုပြသခဲ့သည် ၃၄ လက်မကွေးကောက်မော်နီတာ QLED နည်းပညာနှင့် Thunderbolt 34 ဆက်သွယ်မှု။ ဒီမော်နီတာ resolution အနေဖြင့် ၃,၄၄၀ x ၁,၄၄၀ ကြာသော latency 3.440ms ရှိသည်။ ဒီမော်နီတာကိုနှစ်သက်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်ကစားနိုင်ဖို့အကောင်းဆုံး။ Thunderbolt3ဆက်သွယ်မှုကြောင့် USB 540 ဆက်သွယ်မှုထက် ၄ ဆပိုမြန်သောအမြန်နှုန်း4Gbps ရရှိနိုင်သည်။ စျေးနှုန်းနှင့်ဖြန့်ချိမည့်ရက် - မဖော်ပြထားပါ။
Samsung မှ ၁၄၆ လက်မတီဗီ
Samsung ကဒီကြီးမားတဲ့ TV ကို The Wall အဖြစ်ခံယူထားပါတယ်, မော်ဂျူလာရုပ်မြင်သံကြား 146 လက်မကန့်သတ်ချက်ဖြင့်အသုံးပြုသူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုပိုမိုမြန်ဆန်အောင်ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပြီးမည်သည့်အချိန်တွင်မဆို screen ၏ resolution သို့မဟုတ်အရည်အသွေးကိုလျှော့ချနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး။ Samsung က MicroLED နည်းပညာကိုအသုံးပြုထားပါတယ်။ ၎င်းသည်နောက်ဘက်အလင်းရောင်ကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်ပြီး LED တစ်ခုစီသည်သီးခြားစီအလုပ်လုပ်သည်။ စျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှု - မဖော်ပြထားပါ
၂၀၁၈ အတွက်ရုပ်မြင်သံကြားများတွင် Sony ၏အလောင်းအစားဖြစ်သည်
ဂျပန်နိုင်ငံစုံဆိုနီသည်အစဉ်အမြဲလွှမ်းမိုးခဲ့သောကဏ္ of တစ်ခုဖြစ်သောရုပ်မြင်သံကြားနှင့် CES ၏မူဘောင်အတွင်းတွင်ယခုနှစ်အတွက်အလောင်းအစားကိုပြသခဲ့သည်။ OLED နည်းပညာ၊ Android TV၊ Crystal Sound စနစ်နှင့် 4k resolution တို့ပါရှိသည်. ၂၀၁၈ အတွက် Sony တီဗွီများအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။ ဆိုနီသည်ထိုအဖြစ်အပျက်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည် သင့်ရဲ့ high-end soundbars ပြုပြင်မွမ်းမံ မင်းရဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေအတွက်
Panasonic သည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင်၎င်း၏ရုပ်မြင်သံကြားများတွင် OLED နည်းပညာကိုလောင်းကစားသည်
အကယ်၍ မည်သူမဆိုသံသယဖြစ်ပါက OLED နည်းပညာသည်စျေးကွက်တွင်ရရှိနိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောမျက်နှာပြင်အမျိုးအစားဖြစ်သည့်ဂျပန်ကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။ Pananosic သည်၎င်း၏အလောင်းအစားကိုတင်ပြခဲ့သည် ကြောင်းရုပ်မြင်သံကြား၌ဤနည်းပညာဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ် ၂၀၁၈ ခုနှစ်တစ်လျှောက်လုံးဈေးကွက်တွင်ဖြန့်ချိမည်.
ကရိယာအတွက် CES 2018
ဒီ CES မှာစမတ်ကျတဲ့ရေခဲသေတ္တာတွေပျောက်နေမှာမဟုတ်ဘူး။ LG ကကျွန်တော်တို့ကို ThinQ မော်ဒယ်လ်ပေးထားတယ်၂၉ လက်မထိတွေ့နိုင်သောမျက်နှာပြင်နှင့်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိသည့်ရေခဲသေတ္တာတစ်လုံးဖြစ်သည် ရေခဲသေတ္တာထဲမှာတွေ့နိုင်တယ် မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ညင်သာစွာနှိပ်။ WebOS operating system သည် Amazon ၏ Alexa နှင့်အတူတကွကျွန်ုပ်တို့တွင်ရှိသည့်ထုတ်ကုန်များ၏စတော့ရှယ်ယာများအားထိန်းချုပ်ရန်နှင့်အမေဇုံမှတစ်ဆင့်မည်သည့်အတွက်မှာယူရမည်ကိုသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏ပုံမှန်စူပါမားကတ်သို့သွားခြင်းအားသတိပေးသည်။ စျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှု - မဖော်ပြထားပါ။
တယ်လီဖုန်း၊ ဓာတ်ပုံနှင့်မိုဘိုင်းဆက်စပ်ပစ္စည်းများရှိ CES 2018
Sony Xperia XA2, XA2 Ultra နှင့် L2
ဂျပန်ကုမ္ပဏီဆိုနီ၏ဆိပ်ကမ်းအသစ်များသည်အံ့မခန်းဖွယ်ကောင်းသောအရာမဟုတ်သော်လည်းစိတ်ပျက်စရာကောင်းသော်လည်း၊ အလယ်အလတ်အကွာအဝေးအတွင်းရှိ Sony မော်ဒယ်လ်သုံးမျိုး၏တင်ပြချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့မဖော်ပြနိုင်ပါ။ Sony မိုဘိုင်းဌာနခွဲအတွက်တာဝန်ရှိသူများ၏ ဦး ခေါင်းကိုမည်သည့်အရာကဖြတ်သန်းသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့မသိပါ။ မိုဘိုင်းတယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်ရေးကဏ္withinတွင်သူတို့အတွက်လမ်းကြောင်းအနည်းငယ်သာရှိသည်။ en ဤဆောင်ပါး ဒီ CES မှာ Sony တင်ပြခဲ့တဲ့မော်ဒယ်သစ်သုံးမျိုးရဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေနဲ့စျေးနှုန်းနဲ့ရရှိနိုင်မှုကိုလက်ရှိမသိရသေးပါဘူး။ တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်ရေးကဏ္inတွင်အဆင့်မြင့် Sony အတွက်ကတိကဝတ်ပြုမှုကိုမြင်ရန် MWC ကိုကျွန်ုပ်တို့စောင့်ဆိုင်းရမည်။
Alcatel 2018 အကွာအဝေးတစ်ခုလုံးတွင် ၁၈: ၉ ပုံစံဖြင့်မျက်နှာပြင်တစ်ခုရှိလိမ့်မည်
Alcatel ကို CES ၏မူဘောင်အတွင်း၌ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည် သုံးဆိပ်ကမ်း၏ရေးစပ် ကြောင်းအဖုံး high-end, mid-range နှင့် low-end။ ဒါပေမယ့်ဒီအရာကအကောင်းဆုံးကတော့ကုမ္ပဏီက ၁၈: ၉ ပုံစံနဲ့မျက်နှာပြင်ကိုတီထွင်ဖို့ရွေးချယ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ TCL သည်ထုတ်လုပ်မှုကို ဦး ဆောင်သောထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပြီး LCD ဖန်သားပြင်များရှိသည်။ ၎င်းသည်ပြင်သစ်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အတွက်ပြnoနာမဟုတ်ပါ၊ ၄ င်းတို့၏နောက်ဆုံးစျေးနှုန်းကို ပို၍ စျေးကြီးစေလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
Project Linda ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ Razer ဖုန်းကိုလက်တော့ပ်အဖြစ်ပြောင်းလဲဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်
လွန်ခဲ့သောလအနည်းငယ်ကဂိမ်းကစားခြင်းအတွက်အပိုပစ္စည်းများကိုထုတ်လုပ်သူသည်ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုခွင့်ပြုသည့်ပရောဂျက်တစ်ခုဖြစ်သည့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းကိုတင်ပြခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Razer ဖုန်းကိုလက်တော့ပ်အဖြစ်ပြောင်းပါ ငါတို့နှင့်အတူတတ်နိုင်လိမ့်မည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဖုန်းမှအများဆုံးရယူပါ ဂိမ်းကစားသည့်အခါသာမကဓါတ်ပုံများကိုတည်းဖြတ်ခြင်း၊ စာရွက်စာတမ်းများအားပိုမိုသောအဆင်ပြေစွာရေးသားထားသော backlit keyboard ဖြင့်ရေးသားခြင်းတို့တွင်သာမကကျွန်ုပ်တို့အားပေးထားသည့်အင်္ဂါရပ်များနှင့်ပါ ၀ င်သည်။ ကိရိယာတစ်ခုနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုသည်အဆင်ပြေရန် mouse ကိုကျွန်ုပ်တို့ဆက်သွယ်နိုင်သည်။ ဖြစ်နိုင်သမျှ။
Panasonic က Lumix GH5S
ဂျပန်နိုင်ငံစုံ Panasonic ကဖြန့်ချိလိုက်သည် ဒုတိယမျိုးဆက် Lumix GH5, GH5S၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းသော ISO အဆင့်အတွက်၎င်းကိုအရင်ကထက်ထူးခြားစွာထင်ရှားသောမော်ဒယ်ဖြစ်သည် 51.200 ရောက်ရှိဒီမော်ဒယ်ကကျွန်တော်တို့ကိုကမ်းလှမ်းတဲ့ 10 mpx အာရုံခံကိရိယာအသစ်ကြောင့်ကျေးဇူးတင်ရတယ်။ အရင်ပုံစံလိုဗွီဒီယိုပညာရှင်တွေအတွက်ရည်ရွယ်ထားတဲ့မော်ဒယ်၊ အဲဒါကိုပံ့ပိုးပေးတဲ့အသံဖမ်းပုံစံအမြောက်အများကြောင့်ဖြစ်တယ်။ ဖေဖော်ဝါရီလနှောင်းပိုင်းတွင်ဒေါ်လာ ၂,၃၉၉ ဖြင့်ရောင်းချမည်ဖြစ်သည်။
DJI Osmo Mobile2နှင့် Ronin S
DJI ကုမ္ပဏီသည် Las Vegas ရှိ CES တွင်မိုဘိုင်းပစ္စည်းများအတွက်ဒုတိယတည်ငြိမ်မှု (gimbal ဟုလည်းခေါ်သည်) တွင်တင်ပြခဲ့သည်။ Osmo မိုဘိုင်း 2, ၎င်း၏စျေးနှုန်းလျှော့ချမြင်ကြပြီမသာ, ဒါပေမယ့်လည်းရှိပါတယ်တဲ့ device ကို ၁၅ နာရီအထိကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုတိုးချဲ့ခဲ့တယ်။ ထို့အပြင်မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ကုမ္ပဏီ DJI သည် mirrorless နှင့် SLR ကင်မရာများအတွက် gimbal အသစ်တစ်ခုကိုဖြန့်ချိခဲ့ပြီး၎င်းကင်မရာကိုရိုက်ကူးရန်အလွန်ခက်ခဲသောတည်ငြိမ်မှုဖြင့်အသံသွင်းချက်များကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။
ဝတ်ဆင်အပေါ် CES 2018
Block, ပထမ ဦး ဆုံး modular ဝတ်ဆင်
လက်ရှိဈေးကွက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်စမတ်နာရီဈေးကွက်၌ Apple Watch နှင့် Samsung Gear S3 တို့တွင်အရည်အသွေးနှစ်မျိုးသာတွေ့ရှိနိုင်သည်။ မော်ဒယ်နှစ်ခုစလုံးကိုသိုင်းကြိုးနှင့်အပိုလုပ်နိုင်ပြီးအပိုလုပ်ဆောင်မှုမပါသည့်ကြိုးများ၊ အကြောင်းပြချက်မရှိဘဲ၎င်းတို့လွတ်သွားသောရွေးချယ်မှုတစ်ခုပြုလုပ်နိုင်သည်။ Block ၎င်းသည်အသုံးပြုသောသူသည်ဤစမတ်နာရီတွင်သူလိုချင်သည့်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုရွေးချယ်နိုင်သည် $ 259 ၏စျေးနှုန်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု နှင့်က module တွေ - သို့မဟုတ်လင့်များ - အဖြစ်ခါးပတ်ကိုထည့်သွင်းနေကြသည်အဖြစ်ပမာဏတိုးပွားလာလိမ့်မည်ဟု။ လတ်တလောတွင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ရွေးချယ်ရန် modules (၆) ခုရှိသည်။ ပတ် ၀ န်းကျင်အာရုံခံ၊ နှလုံးအာရုံခံကိရိယာ၊ အသိပေးချက်များအတွက် LED module၊ GPS လက်ခံ၊ အပိုဘက်ထရီနှင့်စမတ်ခလုတ်။
Casio G-Shock သည်စမတ်ကျလာသည်
လွန်ခဲ့သော ၂ နှစ်အတွင်းဆိုနီသည် G-Shock အကွာအဝေးအတွင်းတွင်ဝတ်ဆင်နိုင်သောမော်ဒယ်များကိုစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည် စျေးကွက်မှတဆင့်နာကျင်မှုသို့မဟုတ်ဘုန်းအသရေမရှိဘဲနီးပါးလွန်ပြီ။ သို့သော်သူသည်မျက်နှာသုတ်ပုဝါကိုမချဘဲဗားရှင်းအသစ်ကိုသာထုတ်လွှင့်ခဲ့သည် Casio က G-Shock Rangemanလမ်းကြောင်းများကိုလွယ်ကူစွာခြေရာခံရန်နှင့် GPS တစ်ခုအနေဖြင့်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ၎င်းတွင် altimeter နှင့် barometer ပါဝင်ပြီး၎င်းတွင်ပါ ၀ င်သည့် wireless charger အပြင်ဆိုလာစွမ်းအင်ဖြင့်လည်းအားသွင်းနိုင်သည်။ ၎င်းသည်သံလိုက်အိမ်မြှောင်တစ်ခုနှင့်ပေါင်းစပ်ထားပြီးကျွန်ုပ်တို့အား G-Shock အကွာအဝေး၏ပုံမှန်ကာကွယ်မှုကိုပေးသည်။ ၎င်းသည်ပုံသဏ္usာန်မှပေးထားသောရာဘာကာကွယ်မှုများကြောင့်တုန်ခါမှုနှင့်ရေနှင့်ဖုန်မှုန့်များကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ဖန်သားပြင်မှာ monochrome ဖြစ်ပြီး ၃၃ နာရီကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပေးထားသည်။ ဖန်သည်နီလာဖြစ်ပြီးကျန်ကိရိယာမှာကာဗွန်ဖိုင်ဘာဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ အဆိုးဆုံးမှာစျေးနှုန်းဖြစ်သည် ၎င်းသည်ယူရို ၇၀၀ အောက်မကျဘဲနွေ ဦး ပေါက်ရာသီသို့စတင်ရောက်ရှိမည်။
ကို virtual နှင့်တိုးပွားအဖြစ်မှန်အတွက် CES 2018
HTC က Vive Pro ကို
HTC ကုမ္ပဏီမှတင်သွင်းခဲ့သည် သင်၏ virtual reality ထုတ်ကုန်များ၏ဒုတိယမျိုးဆက်အဖြစ်ဗတ္တိဇံကိုခံ HTC က Vive Pro ကို။ ဤတိုးတက်လာသောဗားရှင်းသည်အခြားမည်သည့်စက်ပစ္စည်းတွင်မဆိုရှာ။ မရနိုင်သော resolution ကိုပေးထားသည်။ ၎င်း၏ OLED ဖန်သားပြင်သည် resolution 2.880 x 1.600 pixels ရှိပြီးယခင်မော်ဒယ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် ၇၆ ရာခိုင်နှုန်းပိုမိုမြင့်မားသည်။ Refresh Rate 76 Hz အထိမြင့်တက်သွားပြီးဒီအမျိုးအစားရဲ့အခြားမည်သည့်ထုတ်ကုန်ထက်မဆိုသာလွန်မြင့်မားသောပုံကိုပေးစွမ်းသည်။ ယခုမော်ဒယ်အသစ်သည် Vive Wirelss Adapter နှင့်ပါ ၀ င်ပြီး၎င်းသည်ယခင် HTC Vive ဗားရှင်းနှင့်သဟဇာတဖြစ်သောလုံးဝကြိုးမဲ့ထိန်းချုပ်မှုအသစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ဂူဂဲလ်မျက်မှန်သည် Mountain View အခြေပြုကုမ္ပဏီမျှော်လင့်ထားသည့်အောင်မြင်မှုမရခဲ့သော်လည်းတရုတ်ကုမ္ပဏီ Lenovo ကလိုချင်ခဲ့သည် အလားတူစနစ်အပေါ်အလောင်းအစား နှင့်အတူ ဖန်ခွက် C220ဂူဂဲလ်၏မျက်မှန်နှင့်မတူသည့်မျက်မှန်များသည်မော်ဂျူလာနှင့်ကျွန်ုပ်တို့အားမယုံနိုင်စရာအလားအလာရှိစေသည်။ ဤမျက်မှန်များသည်ယခုနှစ်တစ်လျှောက်လုံးစမ်းသပ်မှုအဆင့်ကိုစတင်မည်ဖြစ်ပြီးခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ဒေါ်လာ ၁၈၀၀ ဖြင့်ရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီးလာမည့်နှစ်အစောပိုင်းတွင်စျေးကွက်သို့ရောက်ရှိမည်ဖြစ်သည်။
ကွန်ပျူတာအတွက် CES 2018
ထိုင်ဝမ်ကုမ္ပဏီကတင်ပြခဲ့သည် မျိုးဆက်သစ်မှတ်စုစာအုပ်နှစ် ဦး စလုံး input ကိုအကွာအဝေးကဲ့သို့မြင့်မားသောအဆုံးa, အမေဇုံ Alexa လက်ထောက်နှင့်အတူလိုက်ဖက်တဲ့အဓိကအသစ်အဆန်းအဖြစ်ပေါင်းစည်း LTE ဆက်သွယ်မှုနှင့်အတူထုတ်ကုန်ထည့်သွင်း။ ဒီဆောင်းပါးမှာ Las Vegas မှာကျင်းပတဲ့ CES မှာ Acer တင်ပြခဲ့တဲ့မော်ဒယ်အသစ်တွေအားလုံးကိုငါတို့ပြပါမယ်။
Dell က XPS 13
La Dell XPS 13 မှတ်စုစာအုပ် လုံးဝပြန်လည်ပြုပြင်ခဲ့သည် လုံးဝပြန်လည်ပြုပြင် ဆက်သွယ်မှုအမျိုးအစားသာမကဘဲသူတို့ရဲ့ resolution ကလည်း touch screen နဲ့ 4k resolution ပါ ၀ င်တဲ့ထိပ်ဆုံးကိုကမ်းလှမ်းပါတယ်။ ၎င်း၏အထူသည် ၁၁.၆ မီလီမီတာနှင့်အလေးချိန် ၁.၂၂ ကီလိုဂရမ်အထိရောက်ရှိနေသဖြင့်၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့သယ်ဆောင်လာသည်ကိုရှာမတွေ့နိုင်ပါ။ ဆက်သွယ်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း။ XPS 11,6 1,22 သည်ကျွန်ုပ်တို့အား Thunderbolt 13 port နှစ်ခုပေးထားသည်။ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်သည်နာရီ ၂၀ အထိရှိသည်။ ၎င်းကို i2018 နှင့် i3 ပရိုဆက်ဆာများတပ်ဆင်ထားပြီး DDR20 အမျိုးအစား 5,7သို့မဟုတ်4GB GB RDR ပါရှိသည်။ သိုလှောင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ Dell က 8, 16 နှင့်3အမျိုးအစား SSD သို့မဟုတ် 128 TB SSD အမျိုးအစား PCI ကိုပေးသည်
Lenovo က Miix 630
El Lenovo က Miix 630 ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားပြောင်းလဲနိုင်သောကမ်းလှမ်းမှုတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်အတူရောင်းချသည့်ကီးဘုတ်မှတစ်ဆင့်တက်ဘလက်နှင့် laptop တစ်လုံးအနေနှင့်၎င်းကိုအသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အတွင်းပိုင်းကျနော်တို့ရှာပါ Qualcomm ၏ Snapdragon 835, 8 GB RAM နှင့် 256 GB SSD တို့ပါ ၀ င်သည်။ ARM ဗိသုကာနှင့်အတူပရိုဆက်ဆာဖြစ်သည့် Miix 630 သည်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရနာရီ ၂၀၊ ၁၂.၃ လက်မမျက်နှာပြင်နှင့် Full HD resolution ကိုပေးသည်။ အတွင်းပိုင်း၌ Windows 20 S ကိုတွေ့ရပြီး၎င်းကိုယူရို ၈၀၀ ဖြင့်ရောင်းချမည်။
Asus ကမတူညီတဲ့သေးငယ်တဲ့ပီစီတွေတင်ထားပါတယ်တစ်ဖက်မှတစ်ဖက်သယ်ဆောင်ပါ အသုံးပြုသူများစွာ၏လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းရန်စွမ်းအားအလုံအလောက်ရှိပြီး၊ Raspberry Pi မှထုတ်လုပ်ထားသောမော်ဒယ်လ်ပါ ၀ င်သည်။ Asus မော်ဒယ်သစ်များနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုကြည့်ရှုနိုင်ပါသည် ဤဆောင်ပါး.
အသံ CES 2018
JBL ကုမ္ပဏီသည် CES မူဘောင်ကို၎င်း၏အားဖြည့်ရန်အားသာချက်ရှိသည် ခရီးဆောင် devices များအကွာအဝေး နှင့်ငါတို့ခံသောအကြားရေကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည် JBL ကလစ် 3၊ JBL Go2နှင့် JBL Xtreme2။
AKG သည် JBL နှင့် Harman International အုပ်စု၏အဖွဲ့ ၀ င်ဖြစ်ပြီးတောင်ကိုရီးယားကုမ္ပဏီကြီး Samsung မှပိုင်ဆိုင်သည်။ AKG-N5005ဂီတချစ်သူများအတွက်အဆင့်မြင့်နားကြပ် သူတို့ $ 999 မှာစျေးနှုန်းနေကြသည် ပြီးတော့သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကို in-ear နားကြပ်တွေကိုတစ်ခါမှမမြင်ဖူးသေးတဲ့ features တွေပေးပါတယ်
မော်တော်ယာဉ်အတွက် CES 2018
Byton, အနာဂတ်၏ SUV ကား
Tesla မှလူသည်အသက်ရှင်သည်သာမက Elon Musk ၏ကုမ္ပဏီသည်လျှပ်စစ်မော်တော်ယာဉ်လောကတွင်ရည်ညွှန်းချက်ဆက်လက်ရှိနေသော်လည်းယနေ့တွင်လျှပ်စစ်မော်တော်ယာဉ်များကိုဈေးကွက်တွင်စတင်ရန်လုပ်ဆောင်နေသောအခြားကုန်အမှတ်တံဆိပ်များစွာကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည်။ ဤမော်ဒယ်များသည်အလွန်ချမ်းသာသောလူများကိုရည်ရွယ်သည်။ ကံကောင်းထောက်မစွာကား၊ Elon Musk သည် ၃။ အများပြည်သူနှင့် ပတ်သက်၍ အများပြည်သူနှင့် ပတ်သက်၍ စဉ်းစားသူတစ် ဦး တည်းဖြစ်သည်။ တရုတ်ကုမ္မဏီ Byton က၎င်း၏ပထမဆုံးလျှပ်စစ်မော်တော်ယာဉ်၊ လေးထိုင်ခုံလေး SUV (အရှည် ၄.၈၅ မီတာ) နှင့်ထိုနေရာတွင်ရပ်တည်ရန်တရားဝင်တင်ဆက်ခဲ့သည် ကားကိုဖွင့်ရန်ကြေးမုံ (သို့) လက်ကိုင်များမရှိခြင်းသည်ကားကျွန်ုပ်တို့၏မျက်နှာကိုစစ်ဆေးသောအခါဤလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအလိုအလျောက်ပြုလုပ်လိမ့်မည်။ Byton SUV Electric အကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါက.
Fisker E- ရွေ့လျားမှု
Fisker ထုတ်လုပ်သူသည် Tesla ၏လျှပ်စစ်အားကစားကားများနှင့်တိုက်ရိုက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည့် Fisker E-motion မော်ဒယ်လ်ကိုဒေါ်လာ ၁၂၉,၀၀၀ ဖြင့်ရောင်းချနိုင်မည်ဟုလွန်ခဲ့သောလများကကြေငြာခဲ့သည့်အတိုင်းတရားဝင်တင်ခဲ့သည် ကျွန်တော်တို့ကိုတစ် ဦး ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့် ၆၅၀ ကီလိုမီတာ / အကန့်အသတ်ဖြင့်သာရှိသောအမြင့်ဆုံးအမြန်နှုန်းသည် ၂၅၀ ကီလိုမီတာ / နာရီနှင့် ၀ မှ ၁၀၀ အထိအရှိန် ၃ စက္ကန့်အတွင်းs. Fisker e-motion အကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါက
စက်ရုပ်အတွက် CES 2018
ဆိုနီ၏ခွေးကလေး Aibo သည်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်
ဆိုနီသည်ကြည်ညိုဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည် ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကမိတ်ဆက်ပေးကြောင်းစက်ရုပ်ခွေး, ယခု၎င်းသည်၎င်း၏ယခင်စက်ရုပ်များထက် ပို၍ စမတ်ကျပြီးပျော်စရာစက်ရုပ်ဖြစ်သည်။ The အတုထောက်လှမ်းရေး ၎င်းသည်အတွင်းပိုင်း၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပြီးလူတို့နှင့်အမှန်တကယ်တိရိစ္ဆာန်ကဲ့သို့အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်နိုင်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ » CES 2018 အကောင်းဆုံး